ရဲရွာဆည်တကယ်ကျိုးမှာလား ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရဲရွာဆည်တကယ်ကျိုးမှာလား ။
Posted by etone on Oct 21, 2010 in Myanma News |9comments
Freedom News Group ကကူးထားတာ ပြချင်လို့ပါ ။
ဆည်မြောင်း ဌာန မှ FNG သို့ ပေးပို့ သည့် အီးမေး သတင်းပေးပို့ ချက် အချို့ ကို မချွင်းမချန်အကုန်ကူးထားပါကြောင်း ………။
ကျေးဇူးပဲဗျာ ဒီလို တိတိကျကျလေး တင်ပေးလို့။
ဆည်က စဖွင့်တဲ့နေ့ထဲက သိပ်အဆင်မပြေတာထင်တယ်။
အဲဒီလို … ဖလူဝပ်ဒိုင်းနမစ်ကို ဂရပ်နဲ့တောင်ပြလို့ရနေမှတော့…အဲဒီရေဝေရေလဲ၊ဆည်ထိမ်းစံနစ်က အရမ်းကိုနည်းပညာမြင့်ပါတယ်..။
ကျ နော် တို့ က တော့၊ သူ များ ပြော (တင်) တာ ကို လိုက် ဖတ် နေ တယ်။ possibility တော့ မ သိ တော့ ပါ။ ပညာ ရှိ များ တွေး ကြည့် တာ က၊ ပြေး ကြည့် တာ ထက် မှန် ၏ တဲ့၊ ကဲ…ရောင်း ရင်း တို့ ရေ၊ အ ချိန် ရှိ တုန်း ၊ ပြေး ကြည့်ရ အောင် လား ဗျာ……
ဆူး အမြင်ပြောရရင်တော့ မီဒီယာတွေမှာ ဒီလို လှုပ်လှုပ် ပြောဆိုလာရင် တီးတိုးလုပ်နေတဲ့ သူတွေတောင် အများ သတိထားမိတဲ့ အတွက် တခုခုတော့ လုပ်မှာဘဲ.. မကျိုးအောင် ရေဖောက်ချတာမျိုး.. တခုခုပေါ့.. နည်းပညာသမားတွေကတော့ ပိုသိမှာပေါ့.. အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုခုမှားနေတယ်ထင်ပါတယ် … ဒီလောက်ကြီးတယ့်စီမံကိန်းတစ်ခုမှာ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တယ့် ရေအားခံနိုင်မှုကို တွက်ချက်ထားပြီးသားပါ … ပြထားတယ့်ပုံက မလုံလောက်ပါဘူး ..
Id Nay says:
ရဲရွာဆည် ကို ဆည်မြောင်း က ထိန်းသိမ်းထားတာ မဟုတ်ပါ. ရေအားလျှပ်စစ် က ထိန်းသိမ်းတာပါ.
ဖော်ပြပါ ပုံမှာ ကျိုကြောင်း ဆက်စပ်မှု လုံးဝ မရှိပါ၊ Designer ၏ ရေအရှိန် Model တွက်ချက်မှု သာ ဖြစ်နိုင် ပါသည်။
ပွဲဆူရုံ လူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း မှာ တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
လုံးဝ ရှုတ်ချ ပါသည်။
” ပွဲဆူရုံ လူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း မှာ တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ ” ကြိုက်တယ်ဗျာ စိတ်ဓါတ် နဲ့ အေ၇းအသားကို တိုင်းပြည်ကို ချစ်၇င် တိုးတက်စေချင်၇င် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အေ၇းအသား (နုတ်တစ်၇ာ စာတစ်လုံ့း) ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ကြည်နေ့ရတာတွေက အကျိုးမ၇ိုတဲ့ စကားတွေ ဆဲတာတွေ ချည်းပဲ။ အေ၇ှ့တိုင်း ပုံ့စံ သမိုင်းကို ပြန် ကြည့်ပါ။ သတင်းဟာ အတင်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။တိုင်းပြည်ကောင်းစေချင်၇င် ကျန်တဲ့သူတွေ အသာထား နေ၇ာတကာအဆိုးမြင်ဝါဒီ သမားတွေ အ၇င်ပြင်ဖို့လိုမယ်ဗျား။